Esikhathini sethu zezwe futhi utilitarian, lapho amasosha uthi iningi nokuxoshwa zihamba sifihle, kunzima ukucabanga ngesikhathi lapho iyunifomu babukhanya futhi uzwakalisa into efana nayo ngomumo ukuba nesibindi konke njalo - uthando, ukuphuza ukufa. Phakathi izambatho lempi uqokomisa iyunifomu hussar, umsebenzi womfekethisi izintambo. Akunakwenzeka ukudida nanoma iyiphi enye indlela.
Lapho benza hussars
Eqinisweni, i-hussars kwakungafanele okokuqala eRussia, futhi e-Hungary, yize lolu hlobo abakhwele amahhashi kwadingeka ithuba lokuwina inkazimulo izingalo Russian ezimpini eziningi, ikakhulukazi kaNapoleon. Ngisho nangekhulu nanhlanu, okubizwa ngokuthi ukukhanya Magyar nalawo agibela amahhashi. I morphology amagama ala amabutho elisuka Hungarian "uGus" okusho e ukuhunyushwa inombolo "20". Kungani-ke kwenzeka, izazi zolimi mlando bakuthola kunzima ukuchaza namuhla, kodwa izinguqulo ezimbili eziyinhloko. Ngokusho kwenye, kula mabutho ukukhanya ambalwa ngokuzithandela wayefuna ukuhamba lapha uthathe zonke lamashumi amabili, ngoba sikufisela inhlanhla. Inketho sesibili siphathelene imithetho owawuthi inkosi ngayinye amakhosi asendulo kwakufanele zonke amayadi angu amabili ukuthumela ebuthweni inceku.
Khona-ke, ngemva Mohachskoy impi 1526 lapho abantu baseHungary, amaCzech namaRomany eCroatia anqotshwa WaseTurkey ibutho, hussars yaqala ukubonakala emazweni ahlukahlukene, ikakhulukazi e-Commonwealth, lapho umehluko yabo baba amaphiko ngemuva emuva, enhle kakhulu, kodwa iyehlisa lokulwa izinga umgibeli.
Ukuvela hussars eRussia
ERussia, lolu hlobo abakhwele amahhashi uvele zangenkathi yangaphambi Petrine, kubhekwa nguyise Hristofor Rylsky, a Pole, umnumzana, esima phambi "servitor owezizwe." inkampani yakhe isinyathelo ngempela ngempumelelo imingcele eningizimu futhi nokucindezela nezibhelu. Kodwa kulula ngempela nalawo agibela amahhashi Russian waba amandla ngempumelelo lapho babedabuka (Vlachs, baseHungary, amaSerbia futhi Georgians), begqoke dolman. Lokhu kwenzeke ngesikhathi kubusa u-Anna Ivanovna, simema abantu bakwamanye amazwe ukukhonza umqhele isiRashiya, futhi ngesikhathi esifanayo futhi wabelane izici amaqhinga nezindlela yempi.
Ufuna sibe bahle - abe hussar
Ngokuba impi Russian libhekene zokweboleka izingcezu eziningi ezahlukene ewusizo, amahle elula esetshenziswa nezinye wamabutho, ngezinye izikhathi baze babe nolaka. Ngokwesibonelo, hood futhi Circassian kwakufanele angayithandi ngemva izimpi zaseCaucasia, igama elithi "ukudla!" Kusho ukuthatha iqembu lokufeza, livela English "Jess, mnumzane!", Futhi izivakashi abagibele amahhashi yethu mercenary ababebuthene dolman. Lokhu efekethisiwe enhle, eluka futhi, yebo, izintambo ezisontekile esifubeni sakhe akakwazanga ukuhlala izinduna ongenandaba lempi abasebenzi okhonzile. Esikhundleni engazange abe khona, intambo igolide yangempela kwakudingeka hhayi egqwalile yimvula nezinye sezulu esibi, izingubo kumele ibukeke lokhu kwaba njalo limi ngomumo. Akubuzwa ukuthi umfaniswano hussar, "iza ngentengo" futhi okuqondene nelungelo imvelo kwezinhloko zamaviyo ufakaze ingcebo Lokudabuka ahlukile. Ngokwesibonelo, intombazane abadumile abakhwele amahhashi Durov waphoqeleka ukuba akhonze Lithuanian Lancers, Mariupol Hussars ke, ngolimi lwanamuhla, hhayi "wadonsa".
Dolman efekethisiwe ngokwesimiso
Isici esiyinhloko, okuyinto ehlukile hussar iyunifomu, ngokuthi Dolomanov. Naphezu kweqiniso lokuthi imishini Wayekhathalela wezempi ngokwabo, bathunga le jacket letimfisha iphethini kahle ichazwe kuhambisana zonke izici imibala ibutho, okuyinto kwaba ukukhonza. Igama ngokwalo livela "dulama" Hungarian, esikhundleni salokho, has a etymology Turkish. Lokhu jacket kufinyelelwe kuphela okhalweni, kwaba ukuma-up collar, izintambo cross-ezisontekile - ngokuqinisekile nanhlanu. Esimweni sezulu esibandayo, okuyinto sivamile kwenzeka, wayebuye Mentik, jacket ne noboya ngombala. Izintambo abangu yanamathela Dolomanov, futhi Mentik usebenzisa omkhulu izinkinobho convex. amayunithi ezahlukene lempi nhlobonhlobo umbala impahla kuyiphi bathunga dolman. It was mhlophe nge cuffs aphuzi futhi aluka iyunifomu ngokuba sekushiwo Mariupol Regiment, noma oluhlaza amnyama nge oluluhlaza cuffs kanye collar Pavlograd. amayunithi kanjani hussar - imibala eminingi kangaka, futhi yilowo nalowo kubo, yebo, kwaba umthombo yokuziqhenya ngoba yilelo nalelo butho. Ukulahla nodumo ibutho yabo - zimbi kunanoma ukufa. Ngamagwala lapha ukusesha kuyize.
Okunye tincenye imishini hussar
Ukuze zonke ukubaluleka kwalo, dolman - lokhu akukona konke izingubo Hussar. Okungenani, kudingeka tights (ithungwe kusukela indwangu, nge izinkinobho ezinkulu ngaphandle isikhumba ifaka ngaphansi kwesihlalo), amabhuzu (ebusika lemifisha noboya ngombala) amajazi (grey, ne ukuma-up collar futhi inkinobho eyodwa). Ingabe ngisho into efana cartouche (bandolier e ngendwayimane) ngoba inhlamvu. Ngokusebenzisa amanye amahlombe ezigugile sabretache, isikhwama flat ngenjongo efanayo, ukusetshenziswa nokusebenza xaxa.
Futhi-ke, Shako. WayeyiZwi efanayo elihamba, kodwa nge fu elinobuthi izimpaphe, futhi repeykom etishketami (izintambo ezisontekile). Phakathi neMpi 1812, hussars zethu ngokuvamile eyenziwa ephakeme kanye eligadulayo ethumba umgodla wemicibisholo, ukuvikela ngabo ithusi kabili ephethwe ukhozi Russian. Charter liyakwenqabela, kodwa iziphathimandla ukukhombisa ukuzehlisa abalingiswa, ubuka lezi Antics ngokusebenzisa imino yabo.
Indlela ukulungisa ophahleni? Paint - isixazululo esingcono kakhulu!
Izidingo egunjini ingobo yomlando. Imithetho eyisisekelo izinhlangano Ezinqolobaneni